Jawaab degdeg ah
A.Kadib markaan awoodno inaan helno weydiinta, waxaa jiri doona shaqaale laxiriira badeecada si ay wax uga qabtaan weydiintaada oo ay ku siiyaan jawaab celin.Sababtoo ah qof kasta oo u adeega macaamiisha waa mid aad u xirfad leh, wuxuu leeyahay khibrad wax soo saar leh, si fiican ayuu ula xiriiri karaa macaamiisha, wuxuuna bixin karaa adeeg mid-ka-mid ah.
B.Kaliya maahan emaylka, waxaan sidoo kale taageernaa aalado kala duwan oo lagu wada sheekeysto khadka tooska ah, 7*24h online, sida Whatsapp, Wechat, Skype, Linkdin, Facebook, Instagram...
Waxaan isticmaali karnaa qalab kasta oo lagu sheekeysto ama software bulsho oo aad jeceshahay inaad isticmaasho.Raac dookooyinkaaga, waxaad tahay Ilaahayo.
C.Waxaan taageeri karnaa xafiiska mobilada.Haddii aad hayso codsi degdeg ah, waxaanu si dhakhso ah uga jawaabi karnaa macluumaadka xitaa inta lagu jiro fasaxyada ama saacadaha aan shaqada ahayn.
D.Waxaan ka shaqeyneynaa nidaamka miisaanka qiimaha-xirfadeedka-miisaanka, kaas oo si degdeg ah u weydiin kara oo soo xigan kara, bixinta macluumaadka miisaanka si loo xisaabiyo xamuulka, oo si deg deg ah u soo saara miis xisaabeed dhamaystiran.
E.Marka lagu daro taageerada nidaamka xafiiska, waxaan sidoo kale haysanaa gal xog, si aad u wadaagto faylasha xogta aad u baahan tahay wakhti kasta.Haddii aadan soo dejisan karin, waxaan sidoo kale ku siin karnaa.Ama marka aad u baahan tahay caawimadayada xulashada moodeelka, waxaanu ku siin karnaa jawaab celin isla markiiba.
F.Kadib marka la xaqiijiyo dalabka, waxaanu sidoo kale si firfircoon ula socon doonaa horumarka dalabkaada, haddii la soo raray, heerka saadka ka dib rarida, iyo isticmaalkaaga, ku martiqaad
Servo Motor Ac Servo Drive Mitsubushi HMI Delta HMI Logic Controller Plc 1kw Servo Motor